Globen oo lagu qabtay bandhig faneed lagu caawinayo qaxoontiga - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Masraxa weyn ee Globen, Stockholm. Foto: TT
Globen oo lagu qabtay bandhig faneed lagu caawinayo qaxoontiga
Bandhig faneed lacag loogu ururinayo qaxoontiga oo lagu qabtay Stockholm
La daabacay onsdag 30 september 2015 kl 14.54
Maalintii salaasadda waxa magaalada Stockholm, gaar ahaan goobta loo yaqaan Globen lagu qabtay bandhig faneed weyn oo lacag loogu ururinayay dadka qaxoontida ah ee dalalkoodii ka soo barokacay.
- Waa waxa laga xumaado xaaladda uu qaxoontigu ku sugan yahay maanta. Waana mid hadda socotay wakhti dheer. Marba marka ka sii danbaysaysana way ka sii daraysaa. Waa in qof kastaaba si fiican arrintan uga fikiro, iskuna dayo in uu dadka dhibaataysan caawiyo. Waxa aan ka mid ahay dadka aaminsan in inta aan imika samaynayo in ka badan in aan ku tabaruci lahaa dadka tabaalaysan. Waxa aan rajaynayaa in hawshani noqon doonto mid baraarug u noqota naftayda iyo dhammaan bulsho weynta reer Iswiidhan.
Kaasi waxa uu ahaa Björn Dixgård oo ka socday kooxda fanka ee Mando Diao.
Bandhigan oo ay ka soo qaybgaleen fannaaniinta ugu caansan dalkan Iswiidhan iyo waliba dad magac weyn ku dhex leh bulshada ayaa loogu magacdaray Hela Sverige Skramlar, taasi oo af soomaali ahaan noqonaysa dhammaan Iswiidhan oo daasadda u luxaysa sidii ay lacag ugu ururrin lahayd qaxoontiga. Kulankan weyn oo ay fannaaniintu wakhtigoodii iyo hibadoodiiba u hureen dadka qaxoontiga ah, ayaa noqdoy mid lagu guulaystay, waxaana isla markiiba soo xarootay oo la ururiyay lacag gaadhaysa 40 milyan oo lacagta Iswiidhan ah. Lacagtaasi oo lagu caawin doono qaxoontiga tirada badan ee dalalkoodii ka qaxay.
Fannaaniintii ugu caansanaa ee goobtaasi ruxay waxa ka mid ahaa, Björn Dixgård oo ka socday kooxda fanka ee Mando Diao, Carola, Laleh iyo Lars Winnerbäck.
Xafladdan oo socotay in ka badan afar saacadood ayay fannaaniintu si wadajir ah hal mar soo istaageen masraxa, waxaanay ku wada dhufteen hees madashii ruxday oo ay dhammaan dadkii u wada riyaaqeen. Heestaasi ayaa halmuceedkeedu ahaa, ´´ Ingen kan göra allt, men alla kan göra någonting´´ taasi oo micnaheedu yahay, qof kaligii ma samayn karo wax walba, balse midnimo iyo wadajir baa wax lagu wada qabsan karaa.
Dhanka kale Hans Rosling oo ah barafasoor ku takhasusay caafimaadka caalamiga ah, ahna doodyaqaan inta badan ka hadla arrimaha qaxoontiga ayaa isna goobta ka soo jeediyay hadal qiimo badan, waxaanu dad weynihii madasha isugu yimid oo tiradoodu ku dhawayd 12 000 oo qof ku baraarujiyay masuuliyadda bulshada reer Iswiidhan ka saaran qaxoontiga iyo sida ay mihiim u tahay in xil dheeraad ah layska saaro, loona sameeyo qorshe wanaagsan. Waa kan barafasoor Hans Rosling oo dadkii goobta ku sugnaa hogotusaalaynaya sida ay u qalafsan tahay xaaladda qaxoontinimadu iyo sida ay noqon lahayd haddii ay iyagu ahaan lahaayeen qaxoontigii Iswiidhan u soo qaxay.
- Dadkiina dhanka bidix fadhiya, bal ka soo qaada in aad tihiin qaxoontigii Siiriya ka soo qaxay sannadadii u danbeeyay ee Yurub soo galay. Kuwaasi oo tiradoodu dhammayd 300 000 oo qof. Tiradaasi waxa ay noqonaysaa 3% qaxoontiga guud ee barokacay. Dhanka kale saddexdiinan saf ee u horreeyaana bal ka soo qaada in aad tihiin qaxoontigii Siiriya ka soo qaxay ee Iswiidhan soo gaadhay oo tiradoodu dhammayd 80 000 oo qof. Saacaddaa bilaabo idinkoo qaxoontigii metelaya, waxa aan idin leeyahay ku soo dhawaada Iswiidhan.
Hadalkaasi u danbeeyay waxa uu ahaa Hans Rosling oo ah barafasoor ku takhasusay caafimaadka caalamiga ah, ahna doodyaqaan inta badan ka hadla arrimaha qaxoontiga oo hadal ka soo jeedinayay goobta loo yaqaan Globen oo lacag loogu ururinayay dadka qaxoontiga ah.